Ikhabhathi yelog enomtsalane e-Etnedal - I-Airbnb
Ikhabhathi yelog enomtsalane e-Etnedal
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguWenche
Ikhabhinethi yelog enomtsalane enomphefumlo kunye neembono ezintle kufutshane neTonsåsen. I-cottage iyi-95 sqm enombane kunye namanzi abalekayo kwaye ibekwe ngokufanelekileyo eFjellsbygdi, Etnedal - 700 m.o.h. Amathuba amahle okuhamba ehlotyeni nasebusika kunye neemeko zelanga ezilungileyo. Iiyure ezi-2.5 kuphela ukusuka e-Oslo.
Ikhabhinethi iqhagamshelwe kwinethiwekhi ye-Valdres eyona ndlela inde kwaye ineendlela ezilungiselelwe ngumatshini. Apha kukwakho neendlela zokuhamba eziphawulweyo zasehlotyeni, phakathi kwezinye, iBjørgovarden - 1600 m.o.h. kwaye kukho amathuba amahle okuloba kumachibi amaninzi akufutshane.
Imalunga neekhilomitha ezi-6 ukuya kweyona venkile ikufuphi yaseBruflat, malunga. I-15 km ukuya e-Aurdal eneziko le-Valdres alpine, ivenkile yeKiwi eneeyure zokuvula ezongeziweyo kunye neValdres Golf.
Umbuki zindwendwe ngu- Wenche
Iyafumaneka kwimibuzo onokuba nayo ngaphambili / ngexesha lokuhlala kwakho.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Etnedal